Xog: Dowladda Somalia si qarsoodi ah Denmark ugu wareejisay Amaal Nuur ayada oo aysan ogeyn qoyskeeda. | Mareeg Online
Home Xogta Maanta Xog: Dowladda Somalia si qarsoodi ah Denmark ugu wareejisay Amaal Nuur ayada...
Xog: Dowladda Somalia si qarsoodi ah Denmark ugu wareejisay Amaal Nuur ayada oo aysan ogeyn qoyskeeda.
Xog ay heshay heshay mareeg.online line ayaa sheegeysa in dowladda Soomaaliya ay Amaal Nuur Cusmaan oo ah gabar qoyskeeda ka maqneyd mudo laba bilood ay ku wareejisay dowladda Denmark, kadib markii maalin ka hor Taliska boolisku shaaciyey inay gacanta ku hayaan gabadhaas.
Next articleMusharax Odawaa ” Xasan Kheyre wuu kala qeybiyay bulshada Galmudug.
DEG DEG:-Sheekh Shaakir iyo Macalin Max’uud oo laga bixiyay….
Mareeg Ali - February 29, 2020 0
Saraakiil uu hoggaaminayo taliyaha Guutada 15-aad ee Militeriga Soomaaliya General Mascuud una badan Beesha ceyr ayaa xiro Enji ka saaray Macalin Maxamuud iyo Sheekh...